Home » Lahatsoratra farany farany » Divay & Fanahy » Divay mamy any Aostralia
Vaovao Mafampana Aostralianina • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Divay & Fanahy
Mitady fomba mora sy matsiro mankany hijery an'i Aostralia? Azoko atao ve ny manome soso-kevitra ny hahazo vera misy divay, mamaky ny naotiko ary mahita ny zava-mahatalanjona ao Aostralia amin'ny fanondrahana divay vitsivitsy.
Divay amin'ny famolavolana
I Aostralia no kaontinanta kely indrindra, fa ny firenena fahenina lehibe indrindra, kely kely kokoa noho ny kaontinantaly Etazonia. Ahitana tendrombohitra feno rakotra lanezy, tany efitra maina, torapasika fasika ary ala mando - miaraka amin'ny sombin-tany sahaza ny famiazam-boaloboka.
Ny ankabeazan'ny faritra maniry divay dia any amin'ny sisin'ny atsinanan'ny kaontinanta. Misy faritra amoron-tsiraka vitsivitsy amin'ity faritra ity izay mifanaraka amin'ny Pinot Noir sy Chardonnay. Faritra hafa, any afovoan-tany, tonga lafatra ho an'i Shiraz. Ny faritra be orana any akaikin'ny Adelaide Hills dia voatonona ho an'i Riesling, Pinot Noir ary Chardonnay. Ny faritra atsimo amin'ny Lohasahan'i Barossa dia mamokatra Shiraz avy amin'ny tany mahavelona sy tsy feno rano.
Zava-dehibe amin'ny toekarena
Tsy fantatry ny olona sasany fa namokatra indostrian'ny divay i Aostralia izay mifaninana amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hatramin'ny taona 2019, ny firenena dia nanana 146,128 ha ambanin'ny voaloboka, ka i Shiraz dia nifehy 39,893 30 ha (21,442 isan-jato) ary i Chardonnay, karazana fotsy fotsy lehibe indrindra, miaraka amin'ny 16 ha (2468 isan-jato) amin'ny tsena. Misy manodidina ny 6251 famiazam-boaloboka sy mpamboly voaloboka 172,736 mampiasa mpiasa feno sy maharitra tapa-potoana 65 manerana ny faritra mitombo divay 40, manome $ XNUMX miliara isan-taona ho an'ny toekarena Aostralianina.
Ny indostrian'ny divay aostralianina no mpanondrana divay fahadimy lehibe indrindra manerantany - mandefa 780 tapitrisa litatra isan-taona any amin'ny firenena hafa izay lanin'ny ankamaroany any Nouvelle Zélande, France, Italia ary Espana; manodidina ny 40 isanjaton'ny famokarana no laniana ao an-trano. Misotro 530 litatra isan-taona ny aostraliana miaraka amin'ny fihinanana per kapita 30 litatra (divay latabatra fotsy 50 isan-jato, divay mena mena 35 isan-jato).
Manomboka, mijanona ary manomboka indray ny divay
Tamin'ny taonjato faha-18 dia tonga tany Aostralia ny fanapahana voaloboka noho ny ezaky ny Governora Arthur Phillip (1788) izay nitondra azy ireo tany amin'ny zanatany famaizana avy any Cape of Good Hope. Ny andrana voalohany fanaovana winemaking dia tsy nahomby nefa nony farany dia hitan'ny mpifindra monina ny hadisoany (toerana lehibe no jerena) ary nivarotra ny divay tamin'ny 1820.
Ny famokarana divay voalohany dia naorina tamin'ny 1828 (Wyndham Estate) ary toerana nahaterahan'i Aostralia Shiraz. Gregory Blaxand no voalohany nanondrana divay aostralianina ary mpanamboatra divay voalohany nahazo ny medaly volafotsy an'ny Royal Society of Arts (1823) tany London.
Ny lanjan'ny divay eo amin'ny toekarena aostralianina dia nitohy nitatra ary tamin'ny 1830, ny tanimboaloboka dia natsangana tao Hunter Valley. Tamin'ny 1833, James Busby, raisina ho toy ny rain'ny indostrian'ny divay aostralianina, dia nitondra karazana voaloboka iray anisan'izany ny voaloboka frantsay sy ny voaloboka vita amin'ny divay nohamafisiny taorian'ny fitsidihany an'i Espana sy France. John Barton Hack dia nanamboatra tanimboaloboka tao Echunga Springs, akaikin'ny Mount Barker, ary tamin'ny 1843 dia nandefa ny divain'ny divay ho an'ny Mpanjakavavy Victoria, fanomezana voalohany ny divay aostralianina ho an'ny mpanjaka anglisy.
Rehefa maro ny mpiavy eropeana tonga dia nihatsara ny divay. Ireo mpifindra monina avy any Prussia (tapaky ny taona 1850) dia nanangana ny faritra fanaovana divay ny Aostralianina atsimo ao Barossa Valley ary ireo mpanao divay avy any Suisse kosa dia nanangana ny faritry ny divay Geelong any Victoria (1842). VAKIO NY ARTICLE TRANO AO WINES.TRAVEL.